တိဗက်မှာ လူသေသဂြိုဟ်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » တိဗက်မှာ လူသေသဂြိုဟ်နည်း
Posted by panpan on Jul 27, 2011 in Other - Non Channelized, Photography | 25 comments
လူသားစားတဲ့ ငှက်တွေ လူသေသဂြိုဟ်ခြင်း
မြန်မာတွေကတော့ “အရပ်ကောင်းရင် အလောင်းလှတယ်” လို့ပြောကြတယ်
ခုလိုအလောင်းမလှတော့ မြန်မာတွေအနေနဲ့ အရပ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောရမလိုပဲ
ဒါပေမယ့် ဒါက သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်ပဲလေ….
စိတ်တော့ပျက်စရာပဲ။ မိသားစုဝင်တွေက အဲဒီနည်းနဲ့ သဂြိုင်္လ်တာ ဘာမှ မခံစားရဘူးလား။သေတဲ့ သူကသေသွားတာ မှန်ပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့် ရင် ရက်စက်ရာကျမနေဘူးလား။မြန်မာနိုင်ငံ သာမက နိုင်ငံတော်တော် များများမှာ သေတဲ့ သူကို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကလှလှပပ ဖြစ်အောင် မွမ်းမံ ကြတာပဲလေ။ ဘယ်သူက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကြည့် နေနိုင်ပါ့မလဲ။စဉ်းစားစရာနော်။
အထူးသဖြင့် သေဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက မိန်းမသားတွေနဲ့ ကလေးတွေမမြင်သင့်ဘူး
ဘယ်လိုကြီးလဲဟ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးပဲ …..
တိဗက်က လူတွေအားလုံးအဲလိုမျိုးပဲ သဂြိုဟ်ခံကြရမှာလား …
ကုသိုလ်ရတာပေါ ဘုရားဟောနဲဆိုရင်တော ဒီအတိုင်းပုတ်သွားတာထက်စာရင် လင်တတွေအစာလဲဝတယ်
မြေလဲသန့်သွားတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဒီအစီအစဉ်ကိုစတီထွင်ခဲသူကို သွားမေးခြင်တယ်ဘယ်လို
ကောင်းတယ်ပြောရမလား (သေပြီးပြီပဲ၊ ပုပ်မယ့်တူတူ၊ ဘာမှလုပ်မရတော့တဲ့ အပုပ်ကောင်ဆိုတော့)
ဆိုးတယ်ပြောရမလား (ပစ်စလက်ခတ်ကြီး၊ အဲဒီကလူတွေ ကိုယ့်အလှည့်ကျ ဒီလိုဖြစ်မှာပဲ၊ သေတာတောင် ကောင်းကောင်းမသဂြိုဟ်ရဘူးဆိုတော့)
“ထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူလည်း သေရင် အဲလိုသဂြိုဟ်ခံရမှာပဲ၊ အဲ…သေတဲ့လူကလည်း အရင်က အဲလိုပဲ ထိုင်ကြည့်ခဲ့ဖူးမှာ..”
အရင်ကတော့ ကြားဖူးတယ် ခုမှ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ မြင်ဖူးတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ တိဘက်ပြည်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး (တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီး)ဒလိုင်းလားမားကြောင့် နိုင်ငံတကာ မှာ နာမည်ကြီးတယ်။ အနောက်နိုင်ငံမှ တချို့တော်တော်များများဟာ ဒလိုင်းလားမားကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာပြီးစိတ်ဝင်စားကာ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသား စတင်ဗင်ဆေးဂေးလ်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ပေါ့
If possible, let me know original source. Cultural transmitting is an important matter for human development. I never say that it is good or bad.
ကျွန်တော် တို့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ ကြည့်ရင်တော့
ဘယ်လို မှ မဖြစ်သင့် ၊ လက်ခံ နိုင်စရာ မရှိဘူး ပေါ့
ဒီလို ပိုစ်မျိုး အရင်က ရွာထဲမှာ ရှိဖူးတယ်။ အခု တင်တဲ့ ပုံကတော့ ပိုပြီး စုံတယ် ပိုလည်း ပီပြင်တယ်။
ဓါးနဲ့ မွန်းတာ လဒ တွေက သိမ်းငှက်များလို အရေခွံတွေ ဆွဲဆုတ် နိုင်လောက်တဲ့ နှုတ်သီး မရှိတဲ့ အတွက် စားစေချင်လို့ ကျွှေးတာ မစားရမှာ စိုးလို့ ဓါးနဲ့ မွှန်းပေးတာပါ။ နယ်မြေက ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲတွေ များတော့ တူးစွပြီး မြေမြုပ်ဖို့ မလွယ်လို့ ငှက်စာ ကျွေးလိုက်တာ ဖြစ်မယ် ထင်တာပဲ။ ငှက်တွေကလည်း လူသားစားတဲ့ ငှက်ဆိုတော့ ကောင်တွေက ထွားကြတယ်။
ဆေးကျောင်းသားတွေ ခွဲစိတ်ဖို့လှူသလိုပဲပေါ့။ ကျနော်တော့ သဘောကျတယ်။
မောင်သန်းေ၇ွှတို. တစ်စုကို အဲလိုလုပ်သင်.တယ်
သေတဲ့သူရဲ့ဆန္ဒ ဒါမှမဟုတ် ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုရဲ့ ဆန္ဒ အရဖြစ်မယ်ထင်တယ် တခြားနည်းလဲရှိမှပါ …ဘုရားရှင်ရှိစဉ်ကလဲသေတဲ့သူတွေကိုသုသာန်မှာပြစ်ထားလေ့ရှိပါတယ်….
တိဗက် ရဲ့ ပထဝီ မြေအနေ အထား အရ ဒီလို သဂြိုဟ် ရတာ ပါ ။ Sky Burial လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အဓိက က မြေကြီး မာလွန်းလို့ တူးရခက်လို့၊ လောင်စာရှားပါး မှုတွေ ကြောင့်ပါ ။ အကျယ် ကို လင့်ခ မှာ ကြည့် ပါ ။
The majority of Tibetans adhere to Buddhism, which teaches rebirth. There is no need to preserve the body, as it is now an empty vessel. Birds may eat it, or nature may let it decompose. So the function of the sky burial is simply the disposal of the remains. In much of Tibet the ground is too hard and rocky to digagrave, and with fuel and timber scarce,asky burial is often more practical than cremation…….
The customs are first recorded in an indigenous 12th century Buddhist treatise known colloquially as the Book of the Dead (Bardo Thodol). Tibetan tantricism appears to have influenced the procedure. Dissection occurs according to instructions given byalama or tantric adept.….
“Sky burial and open cremation may initially appear grotesque for Westerners, especially if they have not reflected on their own burial practice. For Tibetan Buddhists, sky burial and cremation are templates of instructional teaching on the impermanence of life.”
Jhator is considered an act of generosity on the part of the deceased, since the deceased and his/her surviving relatives are providing food to sustain living beings. Generosity and compassion for all beings are important virtues or paramita in Buddhism. Although some observers have suggested that jhator is also meant to unite the deceased person with the sky or sacred realm, this does not seem consistent with most of the knowledgeable commentary and eyewitness reports, which indicate that Tibetans believe that at this point life has completely left the body and the body contains nothing more than simple flesh.
The government of the People’s Republic of China, which has controlled Tibet since 1950, prohibited the practice (which it considered barbaric) in the 1960s but started to allow it again in the 1980s. People who do not know the deceased usually do not observe it, and direct photography is considered unethical, offensive and is generally forbidden.
A jhator was filmed, with permission from the family, for Frederique Darragon’s documentary Secret Towers of the Himalayas, which aired on the Science Channel in Fall 2008. The camera work was deliberately careful to never show the body itself, while documenting the procedure, birds, and tools…..
ဒီပုံတွေက မြင်ဖူးတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကျော်လောက်ထဲကပါ ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က လင်းတ စာကျွေးတာ မြင်ဖူးချင်လား ဆိုပြီး မေးပို့ပေးတာပါ။ အခု မှ သေသေချာချာ သိလိုက်ရတာက တိဗက်မှာ ဆိုတာ၇ယ် Sky Burial ဆိုတာ ဒီလို မျိုးကိုပြောတာဆို တာပါ ။ အခုလို သေချာ သိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူး တင်ပါတယ် …
ကြောက်စရာကြီး ကျေးဇူးပဲနော် ဗဟုသုတ ရစေလို့
မနှစ်က ကျနော်တင်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ခုဟာကပိုပြည့်စုံတယ်